आफूलाई विद्वान ठान्नेको जीन्दगी खेर गएको देखेर दुःख लाग्छ : प्रधानमन्त्री ओली – hamrosandesh.com
आफूलाई विद्वान ठान्नेको जीन्दगी खेर गएको देखेर दुःख लाग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैका नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताएका छन् । तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटनामा नेपालमा भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनका सपथ बेइमानी हो । तिनका शपथभित्र स्वार्थ पूरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ । अहिले तिनले खाएका शपथ सम्झनुहोस् त । तिनले कहाँ-कहाँ शपथ खाए होलान् तर देशको विरुद्ध बहुतै ठूलो अनिष्टको काम गरिरहेका छन् । जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका काम हुन्छ । नेतृत्व तह अनुशासनहिन र अराजकतामा उत्रिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युकोमा गएर एक जनाले म विरोधमा आएको छु भन्नु भएछ गर्वसाथ । सरम छैन । जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ, माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ ? माथिबाटै धमिलो पानी बग्ने, बगाउने काम भइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेता अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीविरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको बताए । उनले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा, प्रणाली संसदीय प्रणालीविरुद्ध भएको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘समाजलाई अमर्यादाले एकताबद्ध बनाउँदैन । परपीडक प्रवृत्तिले अर्काको आँसुमा रमाउने खालका परपीडक स्याडिस । त्यस्तो स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिन्छ । यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो । परपीडक, असभ्य, छाडा र अराजक तत्त्व अहिले पनि आफूलाई विद्वान ठान्ने । तिनको जीन्दगी खेर गएको देखेर पनि दुःख लाग्छ । उच्च जिम्मेवारी र मर्यादामा रहेका व्यक्तिको अपमान र मनपरी गाली गर्नु आफ्नो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति यो समाजका लागि कति हानिकारक छ ? यो कुनै अरू जीवजन्तुले होइन, आफू पढेलेखेको जान्ने सुन्ने सभ्य छु भन्ने जान्ने, भात होइन पिजा खानेहरूबाट यस्ता कामहरु भइरहेको छ ।
समाजमा बढ्दै गएको अशिष्ट र अराजक गतिविधिविरुद्ध मर्यादा, शिष्टता र सभ्यतातर्फ समाजलाई फर्काउन सभ्य समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसकार्यमा लाग्न आग्रह गरे । विभिन्न चरणको आन्दोलन र राजनीतिक योगदानका कारण संवैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको उपलब्धि प्राप्त भए पनि कतिपयलाई यही उपलब्धि चित्त नबुझेको प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गरे ।
उनले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सामाजिक न्याय र समानता भएपछि मात्रै वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुने र नागरिकको व्यवस्था हुने बताए । समृद्धि र समानता भएको स्थानमा लोकतान्त्रिक समाज हुने भन्दै उनले प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक हक अधिकार, सामाजिक हक अधिकार, समृद्धि र न्यायसहितको समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
विगतमा महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा योगमाया, कमलादेवी सिंह, सहाना प्रधान लगायत नेतृहरूको भूमिका र बलिदानीको चर्चा गर्दै उनले ती सबैले नेपाली समाजलाई राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतनसँगै चेतना वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको बताए । त्यस बेलाको आन्दोलनकै असर स्वरूप अहिले महिलाको समान अधिकारको आकाङ्क्षा प्रकट हुने अवस्थामा आएको उनले उल्लेख गरे ।